भ्रमण र मास्को यात्रा प्याकेजहरू सँगी नागरिक बीच, तर पनि विदेशीहरू बीचमा मात्र होइन धेरै लोकप्रिय छन्। केही लागि, यो अन्य सामान्य दैनिक वास्तविकता लागि सपना हो। बहुमत को coldest अवधि मा अझै पनि घरमा अप holed छ, तर मास्को मा न्यानो दिन को शुरू संग रूसी frosts गर्न डराउँछन् गर्ने विदेशी पर्यटक आफ्नो बाटो मा छन्। सबै क्षेत्रका तिनीहरूलाई बाहेक सत्र र परीक्षा को अन्त पछि pupils र विद्यार्थीहरूलाई बगालको थालेका छन्।
विद्यार्थी अक्सर साना कम्पनीहरु मा भेला र सस्तो अतिथि घरहरू रहन बचत गर्न रुचाउँछु। मिनी मास्को होटल आफ्नै दर्जा, साथै राजधानी मा अन्य होटल छन्। आफ्नो स्तर कोठा, अतिरिक्त निःशुल्क र प्रिमियम सेवा र सहज आवास को एक सेट को मूल्य निर्धारण गर्छ। अक्सर एउटा सानो कम्पनी को लागि ठूलो होटल परिसर मा राखिएको भन्दा 5-15 मा सानो होटल को कोठा मा बस्न थप लाभदायक छ। यो समूह को टाउको सँगैको लागि अत्यन्तै सुविधाजनक छ।
तर सानो मास्को मा होटल यस्तो "थोक" ग्राहकहरु रुचि छैन मात्र हुन्। आज पनि धेरै सस्तो होटल एक व्यक्तिको सर्वश्रेष्ठ सान्त्वना र सेवाहरूको एक विस्तृत श्रृंखला आफ्नो ग्राहकहरु प्रस्ताव गर्न सक्नुहुन्छ। मिनी समीक्षा मास्को मा होटल कोठा को एक सानो संख्या तिनीहरूलाई मा एक परिचित आरामदायक घर वातावरण सिर्जना भनेर देखाउँछ। एकल र डबल र धेरै मान्छे को लागि डिजाइन: तिनीहरूले सामान्यतया विभिन्न प्रकारका कोठा छ। तिनीहरू सबै फलस्वरूप, मूल्य भिन्न, विभिन्न सुविधा स्तर र। हरेक सभ्य मिनी होटल तपाईं पकाउने लागि आवश्यक सबै कुरा छ कि एक भान्सा छ, तर तपाईं पनि होटल कर्मचारी को सेवाहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
सबै भन्दा राम्रो विकल्प ती अतिथि, उपलब्धता र गुणस्तर संयोजन गर्न चाहने लागि सस्तो होटल अर्थव्यवस्था वर्ग हो। तिनीहरूले धेरै किफायती मूल्य र आरामदायक वातावरण हो। तिनीहरूले मांग गर्दै छन् र राम्रो सेवा स्तर "2 तारा" प्रस्ताव, तर त्यहाँ एक स्तर र उच्च छ। "3 तारा" को स्तर संग ग्राहकहरु प्रदान गर्दछ, उदाहरणका लागि मिनी-होटल "Sherston छ", यो एक सम्मेलन कोठा र एक व्यापार केन्द्र छ, रूसी प्रदर्शनी केन्द्र नजिक छ। अप गर्न लागत को 20% सप्ताह निर्मित छूट। कोठा कोठा दैनिक र सनी परिवर्तन साफ गर्दै छन्, टिभी, फ्रिज, क्रकरी र कटलरी छ। तल्लो स्तर एक बिट, तर राम्रो सभ्य अवस्था आफ्नो ग्राहकहरु मास्को "एंकर" मा एक मिनी होटल र "7etazh" प्रस्ताव।
सान्त्वना एक उच्च स्तर अतिथि मिनी होटल व्यवसाय वर्ग सुनिश्चित गर्नुहोस्। उदाहरणका लागि, सानो होटल "SeverSiti" नेटवर्क। आराम, सफाई र आराम, अन्तर्राष्ट्रिय स्तर र वफादार मूल्य निर्धारण नीति गुणस्तर यस उच्च स्तर। तपाईं सरल स्टूडियो देखि लक्जरी अपार्टमेन्ट गर्न, आवास को एक सुविधाजनक श्रेणी चयन गर्न सक्नुहुन्छ। कोठा एलसीडी टीभी र वातानुकूलन, उपग्रह टीवी र उच्च गति इन्टरनेट छन्। कुनै कम सहज अवस्था मास्को "अतिथि घर" र "Manor" मा सानो होटल सिर्जना गर्नुहोस्।
शहर को सरहद मा जो ताजा हावा र मौन आनंद विशाल महानगरबारे बाहिर रहन रुचि जो शहर आगन्तुकहरूलाई चाहनुहुन्छ मास्को मा roadside सानो होटल र मोटेल स्थित छन्। मिनी होटल "अटलान्टा Sheremetyevo" एक गार्ड सहित इलाका Sheremetyevo बन्दोबस्त मा हवाई अड्डा देखि 15 मी टाढा छ। अतिथि लागि रूसी र सेवा , युरोपेली भोजन नजिकैको एक निजी रूसी स्नान छ। गैर कक्षाहरू: मानक, डिलक्स र सुइट्स। त्यहाँ हावा-कंडीशनिंग र उच्च गतिको असीमित इन्टरनेट छ। को मास्को क्षेत्र, 10 मी को आरामदायक सहरमा। मास्को मोटेल देखि एक युरोपेली-वर्ग "नोबल नेस्ट" छ। आज, मास्को मा विभिन्न साना होटल सबैभन्दा विविध सेवा प्रदान गर्न।
होटल बगैचा रवि होटल स्पा कल्याण 5: विवरण र समीक्षा
फ्लेमिङ्गो सनी बीच4* (बुल्गेरिया) फोटो, मूल्यहरु र रूस देखि पर्यटकहरु को समीक्षा
होटल "पटाङ्गिनी" (Vityazevo, स्वर्ण बालुवा सडक 15।): विवरण, सेवा,
नव Belvista होटल3* - सकारात्मक समुद्र
होटल "बेइजिङ", मास्को: ठेगाना, दर, फोटो र समीक्षा
Mexicana Sharm Resort4* (मिश्र, Sharm el-शेख): होटल को वर्णन, यात्री समीक्षा
बस साना वर्ग पाज-32054: इतिहास र विवरण
एक राहत स्तम्भ हुक बुनना सिक्न - यो सिर्फ छ
Sutures संग जन्म पछि ग्लिसरिन suppositories
चित्रहरू, क्रस कढाई: तपाईंले काम गर्दा विचार गर्न आवश्यक छ के?
पुरातन रस: शिल्प, आफ्नो प्रकार, विकास
"Ioann Krestitel" लियोनार्डो दा विंची द्वारा: तस्विर वर्णन
किन विवाह घन्टी को सपना?
पृथ्वीको पाप्रो - पृथ्वीको माथिल्लो कठिन खोल